AAA - TIKO Miverina amin�ny heriny
Fitsinjarana fanampiana ho an’ny traboina Misy zavatra tsy milamina
Toy ny efa mahazatra dia manomboka sahady ny ahiahy sy ny adihevitra mikasika ny fitsinjarana ireo fanampiana avy amin’ny malalatanana ho an’ireo traboina manerana ny nosy izay ny biraom-pirenena misahana ny resaka loza voajanahary na ny BNGRC no nampandraiketana ny fitsinjarana azy.
Marc Tatandraza Ho samborin’ny zandary
Efa nisitrika sy niery hatramin'ny taona 2017 i Marc Tatandraza noho ny fikarohana nataon'ny zandarimariam-pirenena azy tamina fandikan-dalàna maro vitany tamin'ny faritra maromaro teto amin'ny nosy, ka nisiana fitorian'olona maro azy.
Kaominina Ambohimangakely Filamatra amin’ny vary mora
Anisan’ireo mpaka vary etsy amin’ireo mpamomangady etsy Anosibe ireo mpivarotra eny amin’ny kaominina Ambohimangakely.
Famatsiana herinaratra ao Toamasina Tariby 50 km no tsy maintsy soloina
Efa saika ny 80% ny tamban-jotran’ny herinaratry ny Jirama Toamasina simban’ny rivodoza no efa miverina amin’ny laoniny raha ny fanazavan’ny talen’ny Jirama Veloson Leonard.
Fiahiana ireo traboina Nanampy ny BNGRC ny CNaPS
Manoloana ireo voina nihatra tamin’ny mpiray tanindrazana noho ny fandalovan’ny rivodoza AVA ary amin’ny maha orinasa misahana ny fiahiana ara-tsosialy azy dia nitondra ny voatsirambin’ny tanana nanolotra fanampiana ho an’ireo traboina manerana ny nosy ny fianakaviamben’ny CNaPS ka nanolotra vary miisa 55 gony,
Taorian’ny nandalovan’ny rivodoza AVA Nitombo avo roa heny ireo manatona toeram-pitsaboana
Nitombo avo roa heny ireo olona mararin’ny tazo mahery sy ny gripa ary ny aretin’ny taovam-pisefoana taorian’ny nandalovan’ny rivodoza AVA teto amintsika.
Fikambanana Namana Nizara fanomezana ho an’ny mahantran’Antsirabe
Fikambanana iray efa nijoro nandritra ny 6 taona tao Antsirabe ny Association Namana. Toy ny fanaon’izy ireo dia ny fanampiana ireo sahirana no antom-pijoroan’ny fikambanana.
Hiverina amin�ny heriny tsy ho ela ny orinasa TIKO, taorian�ny taona 2009 izay nanapotehana tanteraka ity orinasa Malagasy iray ity.
Ny 50 ka hatramin’ny 80 %-n’ny orinasa mantsy ankehitriny no efa mihodina, hoy ny tale jeneralin’ny A A A Rabenatoandro Lanto miaraka amin’ny orinasa TIKO tamin’ny mpanao gazety omaly. Efa manomboka mamokatra ireo karazam-bokatra nahafantarana ny orinasa hatramin’izay izy ireo. Nambarany fa tsy miova ny kalitaony ary tsy mena-mitaha amin’ny an’ny hafa ny tsirony. Anisan’ireny ny school milk, ny dibera, ny fromazy, ny glasy Corn’ico, ny ronono, ny zava-pisotro Classiko Cola, Classiko orange…, eny hatramin’ny vary.
Efa manao vary koa
Efa mihodina ihany koa ilay milina fitotoam-bary ao Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao hahafahana mamatsy ny varotra anatiny sy hoenti-miady amin’ny fidangan’ny vidim-bary eny an-tsena. Vokatra maro tsy tambo isaina no hiparitaka eny an-tsena mialohan’ny faran’ny taona mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa mandritra ny fety. Tsiahivina fa anisan’ny mandray anjara amin’ny Salon de l’Industrie de Madagascar tanterahina etsy Tanjombato izy ireo nanomboka omaly. Tsy diso anjara amin’izany ireo tantsaha mpamokatra avy amin’ny faritra maro izay miara-miasa amin’izy ireo. Anisan’ireny Andriamatoa André, tantsaha avy any Faratsiho izay maniry mafy ny hiverenan’ny orinasa TIKO amin’ny heriny hahafahan’ity orinasa iray ity mandray ny vokatra ronono sy ny katsaka izay vokarin’izy ireo. Tena nitotongana tokoa mantsy ny fari-piainan’izy ireo nanomboka ny taona 2009 no ho mankaty satria voatery namidy mora avokoa ny vokatra rehetra. Hiitatra miandalana moa ny fisokafan’ny orinasa TIKO manerana ny Nosy.